War Sare: Barccelona Ma Dooneyso Coutinho | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
War Sare: Barccelona Ma Dooneyso Coutinho
Published on September 14, 2017 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(14-9-2017) Liverpool ayaa ka nefisaysa dalabka qalbiga ka jiitay Coutinho ee Barcelona ay la dul taagan tahay.
Sida uu qoray wargeyska Mirror, Barcelona waxay go’aansatay inay faraha ka qaaddo Coutinho oo ay ka noqoto doonisteedii, taas beddelkeedana ay u jeedsato laacibka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Nice ee Jean Michael Seri.
Warku wuxuu sheegay in Barcelona ay diyaar u tahay inay daaqadda ka tuurto dalabka ay ku daashay ee ay la dul taagan tahay Coutinho, laakiin Seri oo ah wiil madow oo xoog badan uu yahay nin ay si sahal ah ku heli karto inkasta oo xagaagii ay ku fashilantay.
Inter Milan ayaa kula tartami doonta Barcelona laacibka Seri, hase yeeshee, sumcadda badan ee ay leedahay ayaa ay Barca kaga faa’iideysan doontaa inay ka dhaadhiciso kubbad sameeyahan awoodda badan in uu heshiis u saxeexo.
Arrintan ayaa timid markii ay Barcelona naaqishaad ku samaysay dhaqaalaheeda, isla markaana ay xaqiiqsatay in Coutinho uu qaali ku yahay, ayna u baahan tahay in ay awooddeeda iskugu geyso Seri oo uga jaban.